Milatariga Itoobiya Oo Guulo Ka Sheegtay Dagaalka Gobolka Tigrey
Saturday November 28, 2020 - 09:24:43 in Wararka by Burco Office 2
Hadalka afhayeenka ayaa ku soo beegmaya xilli ay dowoladda sheegtay inay bilaabayso "wajigii ugu dambeeyay" ee howlgalka Tigrey.
Kulan uu shalay la qaatay ergo ka socotay midowga Afrika ayaa rai'sul wasaare Abiy Ahmed waxaa uu u sheegay in la dhowri doono badqabka dadka rayidka ah ee gobolka.
Horey rai'sul wasaaraha Itobiya waxuu sheegay in militariga ay isku dayi doonaan inaysan waxyeelo u geysan dadka rayidka ah ee ku sugan magaalada Mekelle.
Magaalada Mekelle ayaa waxaa ku nool 500,000 oo qof islamarkana waxaa shacabka looga baaqay in guriyahooda joogaan.
Madaxada TPLF, ee gacanta ku haysa magaalada Mekelle, ayaa waxay wacad ku mareen inay dagaalka sii wadi doonaan.
Qaramada Midoobey ayaa dhankeeda ka digtay suurtagalnimada dambiya dagaal, haddii militariga Itoobiya ay weeraraan magaalada Mekelle.
Qaramada Midoobey ayaa sidoo klae walaac ka muujisay inaysan hay'adaha gargaarka fursad u heleyn inay gaaraan dadka dagaalada ay saameynta ku yeesheen.
Guddiga fulinta ee deegaanka ismaamulka Tigreega ee dalka Itoobiya ayaa bishii September sheegay in go'aan kasta oo golaha Federeeshiinka ka soo baxa oo lagu joojinayo doorasha ka dhacda deegaankaasi uu ula mid yahay dagaal la iclaamiyey oo lagu soo qaadayo deegaanka Tigreega.
"Shacabka Tigreega waxay xaq u leeyihiin iney doortaan ciddii hoggaamin lahayd, halka la rabay in lagu dhiirrigeliyo in la carqaladeeyo doorashadooda waa mid lid ku ah geeddi socodka dimuqraadiyadda" ayaa war-murtiyeedka lagu yiri.
Hase yeeshee golaha ayaa go'aamiyay in dowladda ay maamulka sii heyso muddo aan la cayimin, iyagoo amar ku bixiyay in doorashada dib loo dhigo sababo la xiriira fayraska corona.
Siyaasiyiinta TPLF waxay mar walba ku celceliyaan inay diyaar u yihiin sidii uu gobolkaas - oo xad la wadaaga Eretariya - uu uga sii mid ahaan lahaa Itoobiya. Laakiin waxay hoosta ka xariiqeen in ay difaacan doonaan waxa ay ugu yeereen "ismaamulka iyaga u gaarka ah".